Martech Inowanikwa mune bizMarketing Magazine | Martech Zone
Chipiri, Gunyana 9, 2012 Chipiri, Gunyana 9, 2012 Douglas Karr
Kana iwe ukawana mukana, saina kunyorera kwe bizMarketing Magazine. Ivo vachangobva kuburitsazve chinyorwa chedu pamusoro pekukura uye ramangwana re YemagariroTV. Izvo zvaive zvakanaka kutiona isu muchinyorwa, uye iyo yemadhijitari magazini yaive izere nezvakakura zvinyorwa uye toni yezano.
bizMarketing Magazine inopa mabhizimusi epamhepo uye nyanzvi dzekushambadzira dzakasiyana siyana dzemusoro wenyaya dzakagadzirirwa kuti urambe uchiziva zveshuwa mune inogara ichichinja nyika yekutengesa pamhepo. Nyaya yega yega yemwedzi inosanganisira kusarudzwa kwezvimwe zvemhando yepamusoro zviripo online, pamwe nezvinyorwa zvakasarudzika zvakanyorerwa vaverengi vedu chete.
Tags: bizmarketingipad kuburitsamagazinimagazini yekushambadzira
Iyo ecosystem yeLifecycle Kushambadzira